Home News Cabdi xakiim Cameey oo walaac ka muujiyay Doorashada Maamulka Puntland
Cabdi xakiim Cameey oo walaac ka muujiyay Doorashada Maamulka Puntland
Isaga oo wareysi dhinacyo badan taabanayay siiyay warbaahinta Cabdi xakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey madaxweyne ku xigeenka maamulka puntland ayuu sheegay inuu ka digayo doorashada madaxtinimada ee ku soo wajahan puntland in la musuq maasuqa islamarkaana ay dhacdo doorasho aanan lagu kalsooneyn.
Mr camey ayaa shaaca ka qaaday in musharaxiinta u taagan qabashada hogaanka puntland ay walaac ka muujinaayaan doorashada dhici doonto bilowga hore ee sanadka soo socda maadaama buu yiri guddiga doorashada ee puntland lagu xaglinayo madaxweynasha haatan tallada haya ee cabdi weli Maxamed cali gaas.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu hoosta ka xariiqay madaxweyne cameey in loo bnaahanyahay doorashada puntland inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ahi taababdalkeedane lagu kalsoonaan karo.
Musharaxiinta haatan u taagan qabashada maamulka puntland ayaa ku eedeenaya in cabdi weli Maxamed cali gaas madaxweynaha puntland inuu la dagay siyaasadda iyo hantida shacabka ku nool deegaanada puntland hayeeshee sameeyaynwax waliba oo uu arko danahiisa gaar ka ahi sida la sheegay.
Previous articleCiidamada Dowladda oo dhaq dhaqaaqyo Ciidan kawada Gobolka Sh/hoose
Next articlewaa sidee Xaaladda deegaanka Ceelcade
Howlgalo ka socda Magaalada Boosaaso kadib qaraxii xalay ka dhacay Magaaladaasi
Madaxweynaha Puntland oo daahfuray shir muhiim ah